Zonke amantombazane baphupha enezinwele ezinde, zikanokusho futhi unempilo. Yilokho-ke unikezwa ngokwemvelo, abazi bayakwazisa cha. Ungakwazi ukubuyisela kanjani izinwele futhi ukusheshisa ukukhula kwabo?
Akusiyo imfihlo ukuthi ekhaya, ungakwazi ukupheka ngempumelelo kakhulu izinwele buso. Kuyinto ngokwanele ukubheka efrijini. Yini ingasetshenziswa kwasekuqaleni? Ukuze wenze lokhu, chaza inkinga: ukukhula kancane izinwele, ahlukanisa imikhawulo, izinwele ezingaphili ubude noma phezu-omisiwe sivala. Njengomthetho, umphumela kungaba ukwenza buso ezinjalo, esiza ukuxazulula zonke izinkinga ngesikhathi esisodwa. Lezi zakhiwo ezinhle zihlanganisa wonke amafutha yezimonyo, kodwa umholi phakathi kwabo, yebo, kuyoba burdock, isakhiwo esihle okuyinto namanje aziwa ogogo bethu.
Ngakho, ngemva sokunquma inkinga kufanele bavezwe futhi izinwele hlobo. Ngokwesibonelo, uma unayo izinwele oily, okuyinto ngokushesha zingcoliswe ngamafutha imaski kuzodingeka silinde; Uma izinwele zakho esomile emzimbeni, imaskhi izinwele nge lwesinaphi, ukubuyekezwa yiphi engcono kuleminye njalo, bangakwazi ukugcina kakhulu umswakama, ngakho-ke kungcono hhayi ukuyisebenzisa.
Izinwele buso ngokumelene kwesigaba usizo ukwenza izinwele bushelelezi, acwebezelayo futhi ezithambile. Ngenxa yalezi zinjongo mkhulu sekushiwo ngenhla uwoyela burdock, kanye gelatin evamile, buso okuthiwa "ekhaya-yokuvikela ngocwazi." Gelatin ine omuhle kakhulu izakhiwo ingcina, badinga kuphela ukwazi butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela ubuchwepheshe kanye nokusebenza kwayo. Ngakho: isipuni gelatin uthele ezine iingobho zamanzi abilayo ke shiya sokunika imizuzu engu-15; ke gu a okugeza amanzi noma microwave oven esimweni liquid, bese ukwengeza isipuni ozithandayo namafutha / whey / amafutha kwawenu izinwele; kubangele yonke inhlama ukuhlanza izinwele, ukugoqa esikhwameni ngepulasitiki phezu ukugoqa wonke amathawula kanye hairdryer zishise emaminithi la-15. Uma ungenalo enze leli phuzu lokugcina, umphumela yokuvikela ngocwazi ngeke zisebenze.
Indlela yokubhekana ukukhula kancane izinwele? Ukuze wenze lokhu kungaba ikhambi elihle kakhulu izinwele imaski nge lwesinaphi (wokubuyekezwa okuvumelekile zingatholakala ku-intanethi). Ababili wezipuni lwesinaphi powder buhlanjululwe ngamanzi, kungenzeka eminye wanezela uwoyela isipuni burdock whereupon slurry is akhuhlwe singene izimpande ke ngci cap ubudala. Okokuqala kuyatuseka ukuba kwenzeke kanjalo okungenani isigamu sehora, njengoba eshe kufanele kakhulu. Izinwele imaski nge lwesinaphi (impendulo kuqinisekisa wesenzo ngempumelelo) ingafinyelela Imiphumela enkulu uma ulisebenzisa okungenani kabili ngesonto.
Futhi kakhulu amakhambi ekhaya kukhona uju, Isimanga siwukuthi, imayonnaise. buso ezinjalo kumele usetshenziswe ukuhlanza izinwele, futhi isikhathi eside, mhlawumbe ubusuku. Izinwele iba pushatsya esithambile futhi hhayi.
Izinwele imaski nge lwesinaphi, ukubuyekezwa zazo azikhulumele, imaskhi lamafutha burdock, uju, imayonnaise, amaqanda isikhuphasha - zonke amakhambi ekhaya esihle ezingakusiza nje kugcine izinwele, kodwa ngokushesha zikhula.
Umbala izinwele ngesikhathi sokukhulelwa. Ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo.
Abesifazane inhlanganisela - zangaphansi nganoma yisiphi isenzakalo ekuphileni
Kabili barreled izici isibhamu onobuhle engcono
Airbus 320 - lesikahle ezindiza ibanga phakathi
Ilungiselela inhlama umenzi isinkwa esizodliwa ravioli